blue sky service center: ငွေဖြည့်ကဒ် နှင့် လူလိမ်ပြသနာ ( ၂ )
မနေ့ညက MMUC မှာ ကျွန်တော် Post တခုရေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ်...ငွေဖြည့်ကဒ် ပြသနာအကြောင်းလေးပါ..
ကျွန်တော့်ဆိုင်က ရောင်းလိုက်တဲ့ ငွေဖြည့်ကဒ်ကို ၀ယ်သူတယောက်က သုံးပြီးသားကဒ် ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလာပြောလို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့လဲ အမှန်ပါပဲ..အဲ့ဒီ ငွေဖြည့်က တကယ့်ကို သုံးပြီးသားကဒ်ကြီး ဖြစ်နေတော့ပါတယ်...ဒီလိုဆိုတော့လဲ ရောင်းလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ဆိုင်က ဖြေရှင်းပေးဘို့ တာဝန်ရှိလာပြီပေါ့..သူတို့က ကိုယ့်ဆိုင်က ၀ယ်ထားတာကိုးဗျ..ကျွန်တော် ရှင်းရပါတော့မယ်..အရင်ဆုံး MMUC မှာ Post တခုတင်ပြီး အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းတွေကို အကောင်းဆုံးအကြံညာဏ်လေးတွေ ပေးဘို့ တောင်းဆိုရပါတော့တယ်. သိတဲ့သူတွေက လဲ ၀ိုင်းပြီး ပြောပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ....ဒီလိုနဲ့ပဲ မနက်ရုံး ဖွင့်တဲ့ အချိန် မှာ ပဲ ငွေဖြည့်ကဒ်ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကို ပထမဆုံး ဆက်ပြီး ဆက်သွယ်လိုက်ရပါတော့တယ်....ရန်ကုန် EMS ရုံးပါပဲ..အောက်မှာ website လိပ်စာလေးတောင်ပါသေးတယ်..01 515151 ဆိုတဲ့ဖုန်းနာပါတ်ပါပဲ...ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ကိုင်လိုက်တဲ့အတွက် တော်တော်ဝမ်းသာသွားပါတယ်ဗျာ..မေးရပြီပေါ့ဗျာ..ဒီလို ဒီလိုဖြစ်လို့ပါလို့ ...ချက်ချင်းပဲ အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်..ဒီငွေဖြည့်ကဒ်တွေကို သူတို့ဆီက ထုတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Elite ကထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဆီကို မေးကြည့်ပါဆိုပြီးပြောပါတယ်..ဖုန်းနာပါတ်လဲ ပေးလိုက်ပါတယ် 400952 ကိုဆက်လိုက်ပါတဲ့..ဒါမှ မဟုတ်ရင် ရွှေဂုံတိုင် ရုံးကို ဆက်လိုက်ပါတဲ့ 555476 ကိုဆက်လိုက်ပါတဲ့..အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော့်ပြသနာကို မေ့ပြီး သူတို့ပြသနာကို ခေါင်းထဲ အလိုလို ရောက်သွားတယ်ဗျ... ငွေဖြည့်ကဒ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစုံတရာပြသနာ ပေါ်လာရင် စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရမဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကို မထည့်ပဲ ဘာလို့ ဒီနာပါတ် ချောချောလှလှ လေးတွေကို ဘာလို့ ထည့်ထားရတာလဲဆိုတာ ကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ စောစောစီးစီး ခေါင်းတောင်မူးသွားတယ်ဗျာ..အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တခု သွားစဉ်းစားမိတာကဒီလိုဗျ..ဘာမှ စုံစမ်းလို့မရတဲ့ ဖုန်းနာပါတ်တွေ ထည့်မယ့်အစား..နာရေးကူညီမှု ဖုန်းနာပါတ်ဖြစ်ဖြစ် အရေးပေါ် ဖုန်းအကူညီတောင်းလို့ရမယ့် ဖုန်းနာပါတ်ဖြစ်ဖြစ် ထည့်လိုက်ရင် ပို အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တာပဲ..ဒါမှ မဟုတ်လဲ ငွေဖြည့်ကဒ်ပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာတခုခုရိုက်ပြီး အဲ့ဒီကြော်ငြာရဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကို ထည့်ထားလိုက်ရင် သူတို့တောင် ၀င်ငွေပေါ်ကို ၀င်ငွေကို ဆင့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..စော်ကားပြောနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်..ငွေဖြည့်ကဒ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘာမှ အသုံးမ၀င်တဲ့ အတူတူ မထူးဘူးလေဗျာ..ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက ပိုတောင် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တာပဲ..ထားပါတော့ဗျာ..ဘာပဲပြောပြော ကဒ်တစ်ရာ ၀ယ်ရင် ၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ပေးထားတာ ကို တစ်ကဒ်တစ်သောင်းနဲ့ ရောင်းတော့ 400 ကျပ် အမြတ်ရတာဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းဘိုးလေးတော့ အိပ်စိုက်ပြီး ဖြေရှင်းပေးရတော့မှာပေါ့..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရတနာပုံ call centre ရှိတာပဲလေ..သေချာတဲ့အဖြေတခုကို တော့ပေးမှာပါ..ဆက်လိုက်ပါတယ်..555476 ရွှေဂုံတိုင် ရုံးပါပဲဗျာ.
ဒါဆိုရင်တော့ 555476 က လုံးဝ သေချာသွားပါပြီ..ဒီဖုန်းနာပါတ်ကိုတော့ သေသေချာချာ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ..တကယ်မေးလို့ရပါတယ်...ဖုန်းခေါ်ရခက်တာလေးတခုပဲ ရှိတာပါ..တခါခေါ်လို့ မရတာနဲ့ စိတ်မပျက်သွားနဲ့နော်..ဆက်တိုက်သာခေါ် နော်..သူတို့ နားမခံနိုင်ရင် ထကိုင်လိမ့်မယ်..ကိုင်ပြီဆိုရင်တော့ ဘာမှ ရှောင်လွဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ..ကိုယ်မေးတာ သူတို့ဖြေပေးရတော့မယ်..ဒီနေရာမှာလဲ တကယ့် အသုံးဝင်တဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကို တစ်လုံးပဲ ထားပေးထားတာကလဲ
သိပ်တော့ ကျေနပ်စရာ မရှိဘူးနော်..ဖြစ်နိုင်ရင် များများထားပေးဘို့ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး ၀ိုင်းဖွပေးဘို့ လိုမယ်တောင် မထင်ပါဘူးနော်..ကျွန်တော် စမေးလိုက်ပါတယ် ဆိုရင်ပဲ ဖုန်း အော်ပရေတာက ငွေဖြည့်ကဒ်ရဲ့ Serial Number ကိုတောင်းပါတယ်.. ကျွန်တော်ကလဲ ဒါမျိုးမေးဘူးတော့ အရန်သင့်ပြင်ထားတာပေါ့ ဗျာ..
ပေးလိုက်ပါတယ် Serial Number က1104120000669489 ပါ။။ ဘာမှ မကြာပါဘူး ခဏလေးပါပဲ ချက်ချင်းအဖြေပေးပါတယ် ငွေဝင်သွားတဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကိုပြောပြပါတယ်။။အတိုင်းမသိကို ၀မ်းသာကျေနပ်သွားပါတယ် ..ဒီတော့ ကျွန်တော်လဲ သူ့ဖုန်း ရဲ့ Call Log ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာ အော်မရေတာ ပြောတဲ့ ဖုန်းနာပါတ်ကို သွားတွေ့တယ်ဗျာ..ဒီတော့ ဒီလူတော့ ငါ့ကို လာလိမ်နေပြီပေါ့..ဘာမှ မပြောပါဘူး သူ့ဆီကို လိုက်သွားလိုက်တယ်.အေးအေးဆေးဆေးပဲ မေးတော့မှ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို အခုလိုသိရပါတော့တယ်.. ဒီလိုပါ................မနေ့ညနေက ပုသိမ်ကို ရောက်နေတဲ့ ၀ါးခယ်မက သူ့အသိ ရဲတယောက်က သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး .ငွေကဒ်တစ်ကဒ် ကို ခဲခြစ်ပြီး သူ့ဆီ Message ပို့ပေးဘို့ပြောတယ်တဲ့..
ဒါနဲ့သူက ကျွန်တော်တို့ဆီက လာဝယ်ပြီး မက်ဆေ့ပို့လိုက်ပါတယ်..ရောက်ကြောင်းကိုလဲ သူ့ဖုန်းမှာ ပြပါတယ်တဲ့..
ဒါကို ပုသိမ်မှာ ရောက်နေတဲ့ သူ့အသိ မောင်ရဲကိုကို ဆိုတဲ့သူက ငွေက ဖြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်..ဘယ်လိုမှ ဖြည့်လို့မရပါဘူးတဲ့ ကဒ်က သုံးပြီးသားကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့..မင်းမယုံရင် မင်းဖုန်းထဲကို ဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ပြောတော့..အကူအညီပေးတဲ့ ရဲသားကြီး ဘော်ဘော်လဲ သူ့ဖုန်းထဲကို ရိုက်ထည့်တာ ငွေက မ၀င်ရှာပါဘူး..ဘယ်ဝင်ပါတော့မလဲ ကဒ်ကို ဟိုရဲသားက ရပြီးသားကြီးကိုးဗျ
အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပြန်ရောက်လာကြောင်းပေါ့ဗျာ..ကျွန်တော်လဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်လိုက်ပါတော့တယ် ခင်ဗျား ငွေဖြည့်ကဒ်က ငွေက၀င်သွားပြီလို့ ခင်ဗျားမယုံရင် အော်ပရေတာကို ဆက်ပြီး မေးကြည့်လို့ ဖုန်းနာပါတ်ကိုပေးလိုက်တယ် 555476 ကိုသူ့ကို ဆက်ခိုင်းလိုက်တယ်..သူလဲ မေးလိုက်တော့လဲ အဲ့ဒီ ဖုန်းနာပါတ်ကို အော်ပရေတာက ပြောပြပါတယ်..ဒီတော့ သူကလဲ ပုသိပ်ကို ရောက်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဘော်ဒါကြီး ရဲကိုကို ကြီးကို ပြန်ဆက်ပြီးမေးလိုက်တော့.အခုထိမရသေးဘူးပြောတော့..သူ့ခဗျာ ဖင်ကုတ် ခေါင်းကုတ်နဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ..ရဲက လိမ်နေတယ်ဆိုတာကို သူသိသွားပြီပေါ့ဗျာ..ဒါပေမယ့် သူတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘယ်လို အကန့်တွေ ရှိသလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ..ဘာမှလဲ မပြောတော့ဘူး..ကျွန်တော်တို့ကို တောင်းပန်ရှာပါတယ်..သူ့ကို အပြစ်မတင်ပါဘူး..ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူလဲ တကယ်မသိတာကိုးဗျ..တကယ်အပြစ်ရှိတာ က ဟို ငနဲ ရဲ ဆိုတဲ့ ကောင်ပဲဗျ..သူများပိုက်ဆံကို ပြန်မပေးချင်တာနဲ့
လုပ်ချလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့မှာ တော်တော်ကို အကြပ်ရိုက်သွားတာနော်..ငွေ 10 သိန်းရင်းပြီး ဖုန်းကဒ်တစ်ကဒ်ကို တစ်သောင်းကျပ်အတိနဲ့ ရောင်းတာ 400 ကျပ်အမြတ်ရတာ ဒီတကဒ်နဲ့ကျမှ အရှုံးပါပေါ်ရတဲ့ဘ၀ကို ရောက်တော့တာပဲ..မတရား အမြတ်စားချင်တဲ့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ် ဆိုတော့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲပေါ့ ဗျာ..ဒီအကြောင်းကို ရေးနေတဲ့ အချိန်ထိကို ဟိုရဲကိုကို ဆိုတဲ့ ပြည့်သူ့ဝန်ထမ်း တယောက်ကတော့ အခုချိန်အထိကို သူ့ဖုန်းထဲကို ငွေမ၀င်သေးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဘူးတစ်လုံးခံပြီး ပြောနေတယ်ဆိုတာကို အသိပေးပြောကြားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငွေဖြည့်ကဒ် ပြသနာအကြောင်းကို ဒီနေရာကနေပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့တယ် ခင်ဗျာ..အားလုံး အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်..
By Aung Myo Myint
Posted by ကိုဖိုးကောင်း at 6:59 PM
snowlay February 22, 2013 at 11:28 PM
snowlay February 23, 2013 at 12:10 AM
အကိုရေ....ကျွန်တော်တော့ အစကနေ အဆုံးထိ ဖတ်တယ်နော် ကြိုက်တယ်ဗျာ....ကျွန်တော် share လိုက်ပါပြီနော်.....www.snowlayservicecenter.blogspot.com